DEG DEG: Qarax xoogan oo koor dhacay magaalada Muqdisho | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka DEG DEG: Qarax xoogan oo koor dhacay magaalada Muqdisho
DEG DEG: Qarax xoogan oo koor dhacay magaalada Muqdisho
Qarax xoogan oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa goor dhow oo duhurnimadii maanta ah waxaa uu ku qarxay dhabarka dambe ee Hotelka Maka Al-Mukarama, gaar ahaan meel u dhow halka la dhigto baabuurta.
Sida ay sheegayaan wararka qaraxan oo markii hore ka soo baxayeen warar kala duwan ayaa la sheegay in afar ruux ay ku dhaawacmeen oo mid ka mid ah uu ahaa askari ka mid ah ilaalada Hotelka.
Goob joogayaal ayaa sheegay in gaariga qarxay uu yaalay dhabarka dambe ee dhinaca waqooyi ee Hotelka, oo ah inta badan halka baabuurta la dhigto, maadaama dhinaca Laamiga aanay laheyn meel Parking ah.
“Qaraxa wuxuu ka dhacay dhabarka dambe hotelka, meel garaash oo ku dhegan halka la dhigto baabuurta ee Hotelka, gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayuu ahaa oo ku qarxay banaanka dhabarka dambe”ayuu yiri qof goob jooge ahaa oo la hadlay Wariyaha xaqiiqa.com ee magaalda Muqdisho.
Xilliga Qaraxa dhacayay ayaa waxaa Hotelka ku sugnaa Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda, gaar ahaan Afhayeenada Madaxtooyada iyo Xukuumada, waxaana xiriir aan la sameynay Eng. Yariisow uu sheegay inay bad qabaan dadka ku jira gudaha Hotelka, qaraxana uu ka dhacay dhabarka dambe meel ku dhegan qeybta baabuurta la dhigto ee Hotelka.
Dhamaadkii sanadkii hore ayaa weerar qarax lagu qaadya Hotelka Maka Al-Mukarama oo ka mid ah hotelada ugu caansan caasimada, iyadoo mid ka mid ah weerarkan oo ahaa nin naftii hure oo doonayay inuu gudaha Hotelka isku qarxiyo la qabtay, markii ay wax ka qaldameen aaladii uu wax ku qarxin rabay.
Previous articleDagaal xalay ka dhacay degmada Buulo Burde.
Next articleDhagayso:- Afhayeenka Gobalka Banaadir oo Maanta xilka laga qaaday